Shily: Nifarana ny fitokonanana tsy hihinan-kanina nataon’ireo gadra Mapuche rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2018 18:04 GMT
Araka ny nampahafantarin'ny Global Voices teo aloha, maro tamin'ireo gadra no namarana ny hetsi-panoheran'izy ireo tamin'ny 2 Oktobra, saingy nanohy kosa ireo gadra tao an-tanànan'i Angol, Victoria ary Cholchol. Ny faran'ny 8 Oktobra, namarana ny fitokonany tsy hihinan-kanina taorian'ny fifanarahana tamin'ny governemanta ireo gadra tany Angol sy Victoria. Namarana ny fitokonana ihany koa androany ny tanora Mapuche mitokona tsy hihinan-kanina ao amin'ny foiben'ny famonjàna tanora ao Cholchol, ka namarana tanteraka ny fitokonambe izany.
Toy ny mahazatra, sehatra ho fizarana fihetseham-po ny Twitter. Ny sasany nihevitra fa tsara ny fiafaran'ilay fitokonana, raha manantena ho avy tsy dia ihenan'ny fanavakavahana kosa ny hafa. Iglesia Joven (Fiangonana Tanora) (@pjantofagasta) naneho ny hafaliany amin'ny vaovao:
Nahatsiaro faly i Miguel J. Pedreros (@mjpedreros) saingy naneho ahiahy mikasika ny fampanantenan'ny governemantan'ny filoha Piñera [es]:
http://bit.ly/bRAD3E Fiafarana tanteraka amin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina Mapuche. Mampanantena zavatra betsaka (hanova ny tantaran'ny fifampiraharahana amin'ny Mapuche) i Piñera . Manantena aho fa hanatanteraka io fampanantenana io izy.
Partido Igualdad [es] (Antokon'ny Fitoviana) nampahafantatra bebe kokoa momba ny fiafaran'ilay fitokonana [es]:
Na dia marina aza fa efa nahavita fifanarahana isika dia tsy mahafa-po tanteraka an'ireo rahalahintsika [gadra mitokona tsy mihinan-kanina] izany. Hatramin'ny voalohany, dia nanazava tsara isika fa tsy voavaly tanteraka ny fangatahantsika, saingy nijery ny antony maha-olombelona sy ny fandrosoana amin'ny sehatra maro ” isika, hoy i Jorge Huenchullán [mpitondra hafatra any Mapudungún]. Nofaranany tamin'ny filazana hoe: “Nieritreritra izahay fa ampy hampitsaharana ny fitokonana tsy hihinan-kanina ny fihetsika sasany avy amin'ny governemanta, toy ny famotsorana ireo comuneros sasany. Hitohy hiresaka momba ireo olana hafa sisa, tahaka ny zo hanana tany ny fifampiraharahana ambony latabatra.
Nandroso nanomboka tamin'ny volana Jolay ny fitokonana tsy hihinan-kanina ary nahatratra ny tongotra mby an-dakana. Na dia tapitra aza ny fitokonana tsy hihinan-kanina, mbola ho ela vao ho tapitra ny fifandonana eo amin'ny Mapuche, ny orinasa miahy tena mitrandraka hazo ary ny governemanta ao atsimon'i Shily.